व्यावासयिक पशुपक्षीपालनबाट आर्थिक स्तर उठ्दै - Nepal Samaj
व्यावासयिक पशुपक्षीपालनबाट आर्थिक स्तर उठ्दै
३१ साउन, २०७७नेपाल समाजअर्थ
बागलुङ । पशुपक्षीजन्य व्यवसायबाट ताराखोला गाउँपालिकाका किसानले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ भित्राएका छन् ।
गाउँपालिकाको आँकडाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा पशुपक्षीपालनबाट रु. २ करोड २४ लाख ४३ हजार आम्दानी भएको छ । पशुपक्षीको व्यावसायिकपालन बढेकाले यो वर्ष आम्दानी थप बढ्ने अनुमान छ । भैँसी, बाख्रा, भेडापालन र कृषितर्फ आलुमा गाउँपालिका आत्मनिर्भर छ । गत वर्ष भैँसी, राँगा र पाडापाडीको बेचबिखनबाट रु. ९२ लाख ४५ हजार ६६० आम्दानी भएको छ ।
यस्तै बाख्रापालनबाट रु. ७२ लाख ५१ हजार ६५९ र गाई÷गोरुको बिक्रीबाट रु. चार लाख ९५ हजार ४०० आम्दानी भएको गाउँपालिकाको पशुशाखाले जनाएको छ । सोही वर्ष रु. ८ लाख ७८ हजार १५० को घ्यू र रु. ८० हजार ७६० को दूध बिक्री भएको शाखाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक चिन्तामणि शर्माले बताए ।
गाउँपालिकाभित्र २ हजार ५०० बढी भैँसी, राँगा २७१, पाडापाडी एक हजार ५२९, सात हजार बढी बाख्रा, ३४० भेडा, १२ हजार कुखुरा र १४२ बङ्गुर छन् । खसीबाट मात्रै रु. ५२ लाख ६० हजार ४६० बराबरको आम्दानी भएको छ ।
पक्षीतर्फ सबैभन्दा बढी लेयर्स जातको कुखुरापालनबाट रु. ९ लाख ७० हजार ६५० आम्दानी भएको छ । ब्रोइलर कुखुराले रु. २ लाख २८ हजार ४५० कमाइ दिएको छ । यस्तै रु. १८ लाखको माछा बिक्री भएको छ । व्यवसायीले रेम्बो ट्राउट जातको माछापालन पनि गरिरहेका छन् । वडा नं. ४ छम्टुमा झण्डै रु( ५० लाखको लगानीमा २ वर्षअघि माछापालन थालिएको थियो । कृषि र पशुपालनमा प्रचुर सम्भावना बोकेको ताराखोलाका किसान विस्तारै व्यावसायिक हुन थालेका छन् । केही वर्षअघिसम्म कृषि र पशुजन्य उपज घरायसी प्रयोग र अ‍ैँचोपैँचोमा सीमित थियो । गाउँपालिकाले किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न अनुदान, तालिमलगायत प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
“गाउँटोलमै पुगेर किसानलाई भेट्दा तालीम, प्राविधिक सहयोग चाहियो भन्ने माग बढी छ”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने, “यो वर्ष पनि स्थानीय जातको भैँसी संरक्षणका लागि रु. ७ लाख बजेट छ, गोठ, भकारो सुधारमा पनि सघाउँछौँ ।” सङ्घीय सरकारको रु. ७५ लाख र गाउँपालिकाको रु. ३७ लाख गरी कूल रु. १ करोड १२ लाखको बजेटमा यो वर्ष पाँचवटै वडामा नमूना कृषि ‘फार्म’ सञ्चालन गरिने अध्यक्ष घर्तीले बताए । उनका अनुसार कोरोनाले निम्ताएको बन्दाबन्दीपछि व्यावसायिक उत्पादनतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दो छ ।
ताराखोला स्थानीय उत्पादनका दृष्टिले अगाडि छ । त्यहाँको मुख्य कृषि बाली आलु र भाँगो हो । ३ हजार ६६४ रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती हुन्छ । वार्षिक झण्डै ७१५ मेट्रिक टन आलु फल्ने गर्छ । जसमध्ये ४१० मेट्रिक टनजति बिक्री हुन्छ भने बाँकी घरमै खपत हुन्छ । आलुबाट पनि वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ गाउँ भित्रन्छ । ताराखोलाबाट आलु, भाँगो, नेपाली हाते कागज, अल्लोका कपडा, जडीबुटी, ‘स्लेट ढुङ्गा’, काठलगायतका स्थानीय उत्पादन निर्यात हुन्छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि गाउँपालिकामा ‘कोशेली घर’ समेत निर्माण हुँदैछ । ‘समृद्ध ताराखोला’ को लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले पञ्चवर्षीय योजनामार्फत विकासका काम अगाडि बढाएको छ ।